Wefti ka socda dalka Zambia oo soo gaadhay Somaliland | Berberanews.com
Home WARARKA Wefti ka socda dalka Zambia oo soo gaadhay Somaliland
Wefti ka socda dalka Zambia oo soo gaadhay Somaliland
Hargeysa (Berberanews) Wasiirka Cadaaladda dalka Zambia, Gavin Lubinda iyo wafti uu hoggaaminayo ayaa soo gaadhay Caasimadda Somaliland ee Hargeysa, waxaannu ka soo dagay Maadaarka Cigaal International Airport.
Wasiir ku xigeenka ahna ku simaha wasiirka arrimaha dibadda Somaliland mudane Liibaan Yuusuf Cismaan iyo saraakiil ka tirsan wasaaradda arriimaha dibadda ayaa qaabilay waftigan balaadhan ee dalka soo gaadhay.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa BBC u sheegay in wafdigan ay casuumaad u fidiyeen isla markaana ay ka qeyb tahay dadaalladaa ku aadan qadiyadda madaxbanaanida iyo sidii xidhiidh iyo iskaashi ay ula yeelan lahaayeen dalal dhowr ah.
Waxaana lagu wadaa in wafdigan ay kulan la yeeshaan madaxweynaha Somaliland ayna ka wadahadli doonaan arrimo siyaasadeed iyo kuwo iskaashi.
Previous articleTurkiga oo xabsiga ku guray saraakiil hawlgab ah
Next articleSaraakiil ka soo goostay Milateriga Somalia oo Hargeysa lagu soo dhaweyay